हिक्मत आत्महत्या गर्ने इन्जिनियर हुँदै होइनन्, घटनाको छानबिन होस् - Engineers Post
हिक्मत आत्महत्या गर्ने इन्जिनियर हुँदै होइनन्, घटनाको छानबिन होस्
ई. पर्वत पौडेलJuly 14, 2021
मोबाइल चलाउँदै गर्दा सोमबार दिउँसो इन्जिनियर्स पोस्टमा ‘बिहान कार्यालय गएका गाउँपालिकाका इन्जिनियर बुढाले गरे दिउँसो आत्महत्या’ शीर्षकमा खबर पाएँ । तर, मैले सो खबर पत्याउन सकिन । भुलबस मेरा साथी बुढाको फोटो पो पर्यो कि भन्ने लाग्यो । हतारहतार समाचार खोलेँ ।
समाचारमा उनको पुरा नाम र कार्यालयको नाम पनि लेखिएको थियो, हिक्मत बुढा, तुर्माखाँद गाउँपालिका, अछाम । त्यसपछि भने नपत्याइरहन सकिन ।
देशको लागि सेवा गर्न प्रतिष्ठित पदमा स्थानीय निकायमा कार्यरत इन्जिनियरले आत्महत्या गरेको भन्ने कुरा म कल्पना पनि गर्न सक्दिन । किन भने हिक्मत उसको जस्तो नाम छ, त्यस्तै आँट र व्यवहार थियो । मैले बुझेअनुसार मेरो प्यारो साथी हिक्मत आत्महत्या गर्ने खालको मानिस हुँदै होइन ।
हामी इन्जिनियरिङ पढ्दा सँगै चार वर्ष बित्यो । हामी सँगै बस्यौँ पनि । विशेष गरी हाम्रो समूहमा पाँच जना थियौँ, हिम्मत, म, जनक, दामोदर र कर्ण बहादुर । पाँच जनामध्ये पनि हिक्मत र म कहिल्यै पनि छुट्टिएरु अलग बेञ्चमा बसिएन । सधै सँगै एउटै बेञ्चमा बस्ने, घरमा आउने जाने गर्ने, अति नै मिलनसार हिक्मतलाई नजिकबाट चिनेको कारणले पनि म सजिलै अनुमान लगाउन सक्छु कि यो आत्महत्या होइन ।
हिक्मत मभन्दा करिब ५ वर्षले जेठो थिए । हामी एक अर्कालाई बाजे–नाति भन्ने गर्थ्यौँ । उनी मेरो लागि एक मेन्टर पनि थिए । धेरै कुराहरूमा सरसल्लाह दिन्थे । सधै सकारात्मक सोच भएका उनले नकारात्मक कुरा कहिल्यै गरेनन् । सानो उमेरमा आफ्नो बाबालाई गुमाएका उनी एकदम जिम्मेवार, मेहेनती र मिलनसार थिए ।
पढ्दा जहिले पनि हामीलाई गाइड गर्थे, नराम्रो कुरा कहिले गर्ने थिएनन् र हामीलाई पनि कहिले नराम्रो कुरा सिकाएनन् । हामीले कुनै नराम्रो कुरा गर्दा गाली गर्थे । कलेज पढ्दा पनि कहिल्यै कसैसँग झगडा, मनमुटाब भएन । मैले बुझेअनुसार हिक्मत हिम्मत हार्ने मानिस हुँदै होइनन् । यही साउनमा काठमाडौँ आउँछु होला नाति भन्थे । यदि आउन पाएन भने दसैँ–तिहारको बीचमा कोहलपुरतिर भेट्ने सल्लाह भएको थियो ।
करिब एक महिना अगाडि मसँग कुराकानी भएको थियो । असारको समयमा एकदम धेरै कार्य व्यस्तता भएको भन्ने गुनासो पनि गरे । साथी सरकारी जागिरे, त्यसमाथि असारको चपेटो होला भनेर मैले पनि खासै फोन गरिन ।
ई. पर्वत पौडेल
एकदम असल साथी, मिहेनती अनि इमानदार इन्जिनियरलाई मैले र उसको परिवारले मात्र गुमाएका छैनौँ, सिंगो देशले नै एउटा इन्जिनियर गुमाएको छ । एक असल साथी गुमाएकोमा म अत्यन्तै दु:खी छु । हिम्मत जस्तो मिलनसार, कर्तव्यनिष्ठ, लगनशील साथी पाउन गाह्रो हुन्छ । मलाई यो आत्महत्या हो जस्तो लाग्दैन किन कि बेलाबेला कुरा हुँदा पनि स्थानीय तहमा काम गर्न गाह्रो हुने रहेछ नाति भन्ने गर्थे उनी । मेरो साथीलाई कुन हदसम्मको गाह्रो भएको रहेछ, त्यो त उनको रहस्यमय मृत्युले नि बतायो । साथीले ज्यान त गुमाए तर आत्महत्याको कारण देखाएर घटनामा छानबिन नहुनु यस्ता तमाम निर्दोष इन्जिनियरहरूको लागि दु:खको विषय हो ।
यो घटना रहस्यमय भएको हुँदा सत्य तथ्य छानबिन गरी कोही दोषी भए कडा भन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दछु । यस्ता रहस्यमय घटनाहरुको नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले पनि छानबिन गर्नु पर्छ र तुरुन्त सम्बन्धित निकायमा छानबिनको माग गर्नका लागि पहल गर्न अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु ।
मेरो प्यारो साथी, तिमी रहेनौँ । यतति छिटो छाडेर गयौ कि तिमी साँच्चिकै बाजे पनि त हुन पाएनौँ । तिम्रो आत्माले शान्ति पाओस् साथै शोकाकुल परिवारप्रति ईश्वरले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरुन् । तिमीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली साथै परिवारजनमा गहिरो समवेदना अर्पण गर्दछु ।
अलबिदा बाजे !
उप्कियो रातारात गरेको सडक कालोपत्रे
गण्डकी प्रदेश ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवमा ई. राम कुमार श्रेष्ठ
स्ट्रक्चर इन्जिनियर विज्ञ माग गर्दा स्नाकोत्तर पास र ९ औँ तहमा माग गर्नुपर्छ– स्टक्चरल इन्जिनियर्स एसोसिएसन
व्यवसायी दीपक मल्होत्राले हडपेको सार्वजनिक जग्गा सरकारको कब्जामा